Mutsananguri Vhidhiyo yekugadzira Matipi uye Mhando | Martech Zone
Mutsananguri Vhidhiyo yekugadzira Matipi uye Mhando
China, August 20, 2015 Chipiri, Gunyana 6, 2015 Douglas Karr
Isu tiri pakati chaipo peimwe kutsanangura kugadzirwa kwevhidhiyo sezvo ini ndiri kunyora izvi uye ndaona zvinoshamisa mhedzisiro kubva ku mavhidhiyo atakatogadzira, akanyorwa, kana akagovaniswa. Iyi isinganzwisisike infographic mukugadzira inotsanangudza mavhidhiyo inopa yakasimba nzira yekugadzira mavhidhiyo anotyaira kubatikana uye shanduko.
Saka, iwe unogadzira sei vhidhiyo yekutsanangura iyo ichawedzera yako yekutendeuka mwero? Kuti ndikubatsire kunze, ini ndagadzira iyo infographic iyo inoputsa iyo nzira yekugadzira yeiyo yakakwana inotsanangura vhidhiyo. Neil Patel, Quicksprout.
Takagovana mutsananguri vhidhiyo pane anotsanangura mavhidhiyo kuti ungangoda kuongorora. Uye takagovana akati wandei mienzaniso yemavhidhiyo ekutsanangura, kunyangwe iyi infographic kubva kuQuicksprout ine yakatowanda!
Kana iwe uchida kuona imwe gwara pa Mutsananguri Vhidhiyo Kugadzira, tarisa iyo McCoy Productions Nongedzo pane Anotsanangura Vhidhiyo Kugadzira.
Iko chete kugadzirisa kwandingaite kune ino infographic ndeiyi kutsanangura kugadzirwa kwevhidhiyo matanho akatsanangurwa. Nhanho yechipiri script uye nhanho 2 iri kubhodhi vhidhiyo mumusoro. Ini handibvumirane… uye ndaisimbirira kuburitsa mufananidzo wakaipa wechiitiko chimwe nechimwe nemagwaro akakodzera, ndobva ndaisa pamadziro kana patafura, zvinopa mufananidzo wakajeka kwazvo wekureruka uye kumhanya kweiyo vhidhiyo yekutsanangura. Wese mugadziri wevhidhiyo watakashanda pamwe naye akapa izvi uye zvakachengetedzwa tani yenguva yekugadzira.
Dai taifanira kufamba tichidzoka uye nekudzoka pavhidhiyo yakagadziridzwa, tinogona kunge takatambisa nguva pazvinhu zvinoonekera zvaisazoshandiswa, kana kupotsa kugadzirwa kwezviitiko zvaida kuwedzerwa. Zvakawanda senge mockups yeapplication chengetedza nguva yekuvandudza, nzvimbo dzekumisikidza dzino chengetedza iwe toni yekuedza mune yako inotsanangura vhidhiyo yekugadzira.
Tags: gadzira inotsanangura videoanotsanangura videokutsanangura kugadzirwa kwevhidhiyo
Izvo zvinhu zvina zvaunofanirwa kuve nazvo mune yega yega Chikamu cheMukati
Kunzwisisa Kudiwa Chizvarwa vs Lead Generation